Maxay Tahay Miisaaniyadda Suuqa ee Saxda ah Boqolleyda Dakhliga? | Martech Zone
Axad, Agoosto 23, 2015 Axad, Oktoobar 18, 2015 Douglas Karr
Waxaa jira daqiiqado aan raaxo lahayn mararka qaarkood oo shirkaddu i weydiiso sababta aysan u helin feejignaan badan sida tartamayaashooda. In kasta oo ay suurtagal tahay in ganacsigu uu dhaafo tartamayaasha sababtoo ah badeecad ka sarreysa ama dad, haddana waxay u badan tahay inaysan ka ahayn in shirkadda leh maalgashiga ugu weyn ee iibka iyo suuqgeynta ay guuleysan doonto. Xitaa wax soo saar ka sarreeya iyo ereyga cajiibka ah ee afka had iyo jeer kama adkaan karaan suuqgeynta cajiibka ah.
Waxaa jira seddex marka laga reebo qaanuunka kobcinta suuq geynta boqolkiiba dakhliga.
Kartida Waxsoosaarka - badeecadaadu aad ayey u wanaagsan tahay in macaamiishaada iyo warbaahintaadu ay waqtigooda iyo xooggooda geliyaan iyaga oo aan saameyn ku yeelan miisaaniyaddaada.
Iskuduwaha Sare - halkii aad ka bixin laheyd suuq geynta, waxaad siinaysaa abaalmarin qiimo dhimis ah macaamiishaada kuwa waqtigooda iyo tamartooda galiya. In kasta oo aysan kharash ahayn, haddana waa hoos u dhac ku yimid dakhliga.
Dadnimada - laga yaabee inaad leedahay hoggaamiye feker caan ah oo lagaa codsaday inuu meel walba ka hadlo, isagoo siinaya fursado xiriir dadweyne oo aan caadi ahayn iyada oo aan loo baahnayn maalgalin miisaaniyadeed. Ama waxaa laga yaabaa inaad haysato shaqaale dilaa ah oo keena natiijooyin cajiib ah, dib u eegis, iyo wadaagista warbaahinta bulshada oo horseedda koritaanka.
Daacad noqo, in kastoo. In kasta oo aan aaminsanahay inaan haysanno badeecado iyo dad ka sarreeya, haddana inta badan waxay la siman yihiin kuwa nala tartamaya. Xaaladdan oo kale, qaanuunka ayaa khuseeya. Miisaaniyadda suuqgeynta boqolkiiba ama dakhliga waa inay korortaa haddii aad rajeyneyso inaad dardargeliso kobaca ganacsigaaga. Waa maxay bartaas macaan? Sawir-gacmeedkan laga soo qaaday Captora wuxuu bixiyaa xoogaa aragti ah:
46% shirkadaha ayaa qarash gareeya in ka yar 9% guud ahaan dakhliga.
24% shirkadaha ayaa qarash gareeya 9 ilaa 13% guud ahaan dakhliga.
30% shirkadaha ayaa qarash gareeya in ka badan 13% guud ahaan dakhliga.
Baaxadda shirkaddu waxay leedahay saameyn sidoo kale. Shirkadaha shirkaduhu waxay celcelis ahaan ku bixiyaan 11% miisaaniyadda halka shirkadaha yar yar ay ku bixiyaan 9.2% miisaaniyadda. Shirkadaha qorsheynaya ka fiicnaadaan kuwa la tartamaya maalgashiga 13.6% ee dakhliga guud in sidaas la sameeyo.
Waxay ku saabsan tahay tirooyinka, suuqleyda ayaa si joogto ah isugu dayaya inay ogaadaan inay ku guuleysanayaan dadaalkooda suuq geyn. Laga soo bilaabo lacag ururinta miisaaniyadda iyo ka faa'iideysiga tiknoolajiyada si loo go'aamiyo guusha raadinta dabiiciga ah iyo shakhsi ahaantaada dadaalkaaga, suuqgeynta da'da dhijitaalka ah waxay dareemi kartaa sida hal imtixaan xisaabeed oo weyn. Infographic this, Captora wuxuu baarayaa sida loo helo miisaaniyada saxda ah, looga faa'iideysto aaladaha saxda ah, loo xaliyo isla'egta raadinta, loona tijaabiyo waxyaabahaaga natiijooyinka ugu badan.
Dabcan, shirkad kastaa waxay aaminsan tahay inay heystaan ​​wax soo saarka ugu fiican ama dadka… marka howsha ku kalifaysa inay ka go'an tahay inay miisaaniyad suuq geyn ballaaran marwalba caqabad ku noqoto. Waxaan rajeyneynaa, cilmi baaristani inay kaa caawin doonto sidii lagugu xil saaray qabashada saamiga suuqa!
Tags: captorasawir qaas ahdhererka ereygamiisaaniyadda suuqgeyntamiisaaniyadaha suuq geyntaxisaabta suuqgeyntacabirrada suuqgeyntatirada ereyada muhiimka ahboqolkiibaboqolkiiba dakhligamiisaaniyada seo